Friend (2001) | MM Movie Store
ဂြှနျဆုတျ ,ဒုနျဆု ,ဂနျြဟို နဲ့ ဆနျတဈ တို့ ဟာ ငယျစဉျကတညျးက အတူဆော့ကစားခဲ့တဲ့ ငယျသူငယျခငျြးတှပေါ…သူတို့ထဲမှာမှ ဂြှနျဆုတျနဲ့ ဒုနျဆုတို့ ဟာ ကြောငျးမှာ ကလနျကဆနျလူဆိုးလေးတှဖွေဈတာကွောငျ့ ကြောငျးထုတျခံလိုကျရပါတယျ…
နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာပွီးနောကျမှာတော့ ကနျြတဲ့သူငယျခငျြး နှဈယောကျဟာ တက်ကသိုလျအသီးသီးဆကျတကျခဲ့ကွပမေယျ့….ဂြှနျဆုတျကတော့ အိမျထောငျကသြှားပွီး ဒုနျဆုကတော့ လူဆိုးဂိုဏျးတဈခုရဲ့ ခေါငျးဆောငျဖွဈလာပါတယျ….
ကနျြတဲ့သူငယျခငျြးနှဈဦးနဲ့ ပွနျလညျတှဆေုံ့ခဲ့ပမေယျ့ ဒုနျဆုနဲ့ သိပျအစေးမကပျတော့ပါဘူး…ဒါကွောငျ့ ကနျြသူငယျခငျြးသုံးဦးသာ အတူတှဲနမေိကွတာပေါ့..ဖွဈခငျြတော့ ဒုနျဆု ဦးစီးတဲ့ ဂိုဏျးဟာ ဂြှနျဆုတျအဖတေို့ ဂိုဏျးနဲ့ ရနျဘကျဂိုဏျးဖွဈတာမို့ သူငယျခငျြးနှဈဦးကွား အထငျလှဲမှားမှုတှစေတငျလာခဲ့ပါတယျ….
ဂြှနျဆုတျကလညျး သူတို့ ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျကို ဒုနျဆုက လုပျကွံဖို့ကွိုးစားခဲ့တယျလို့ သံသယဝငျခဲ့ပွီး…ကနျြတဲ့ဂိုဏျးသားတှကေလညျး ဒုနျဆုကို ပွနျလညျလုပျကွံဖို့ ကွိုးစားလာတဲ့ အခါမှာတော့….
ဂိုဏျးစတားကားတှထေဲမှာ အတျောလနျးတဲ့ ဇာတျကားလေးဖွဈတဲ့ အပွငျ ဒုနျဆုအဖွဈ ဒါရိုကျတာရငျက သရုပျဆောငျထားတာကွောငျ့ လကျလှတျမခံဘဲကွညျ့သငျ့ပါကွောငျး
ဂျွန်ဆုတ် ,ဒုန်ဆု ,ဂျန်ဟို နဲ့ ဆန်တစ် တို့ ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အတူဆော့ကစားခဲ့တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါ…သူတို့ထဲမှာမှ ဂျွန်ဆုတ်နဲ့ ဒုန်ဆုတို့ ဟာ ကျောင်းမှာ ကလန်ကဆန်လူဆိုးလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်…
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီးနောက်မှာတော့ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ဟာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးဆက်တက်ခဲ့ကြပေမယ့်….ဂျွန်ဆုတ်ကတော့ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီး ဒုန်ဆုကတော့ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်….
ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့် ဒုန်ဆုနဲ့ သိပ်အစေးမကပ်တော့ပါဘူး…ဒါကြောင့် ကျန်သူငယ်ချင်းသုံးဦးသာ အတူတွဲနေမိကြတာပေါ့..ဖြစ်ချင်တော့ ဒုန်ဆု ဦးစီးတဲ့ ဂိုဏ်းဟာ ဂျွန်ဆုတ်အဖေတို့ ဂိုဏ်းနဲ့ ရန်ဘက်ဂိုဏ်းဖြစ်တာမို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးကြား အထင်လွဲမှားမှုတွေစတင်လာခဲ့ပါတယ်….
ဂျွန်ဆုတ်ကလည်း သူတို့ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကို ဒုန်ဆုက လုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ သံသယဝင်ခဲ့ပြီး…ကျန်တဲ့ဂိုဏ်းသားတွေကလည်း ဒုန်ဆုကို ပြန်လည်လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ အခါမှာတော့….
ဂိုဏ်းစတားကားတွေထဲမှာ အတော်လန်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ အပြင် ဒုန်ဆုအဖြစ် ဒါရိုက်တာရင်က သရုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့် လက်လွတ်မခံဘဲကြည့်သင့်ပါကြောင်း
9-1-1 (Season 3) ၊ အပိုငျး (၁၀)
All Ladies Do It – Link 2